:: My Little World ::: Happy Birthday My Little Brother!
ဖေဖေ မေမေရဲ့ အသည်းနှလုံး၊ မောင်နှမတွေထဲမှာ အလိမ္မာဆုံး၊ ဘာသာတရား အကိုင်းရှိုင်းဆုံး၊ မိဘတွေအပေါ် အသိတတ်ဆုံး သားငယ်လေး.... အစစအရာရာ ကြံတိုင်းအောင် ဆောင်တိုင်းမြောက်လို့အခုလိုပဲ မိဘကို ကောင်မွန်စွာ လုပ်ကျွေးနိုင်တဲ့ သားကောင်း သားမြတ်၊ သားလိမ္မာတစ်ဦး အမြဲဖြစ်ပါစေ။
ဒီနေ့ကျွန်မရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော မောင်လေး မွေးနေ့ ။ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ က မောင်လေး မွေးနေ့ရောက်တော့မယ်လို့တွေးလိုက်မိပေမယ့် မွေးနေ့ ရက်မှာတော့ သတိမထား မိလိုက်ဘူး။ မေမေနဲ့ညီမလေး ပို့ တဲ့ အီးမေးဝင်လာမှ ဒီနေ့မောင်လေး မွေးနေ့ ဆိုတာ သတိရလိုက်တယ်။မောင်လေးစီ အီးမေးပို့ ပြီး ဘာလိုချင်လဲ၊ မွေးနေ့ လက်ဆောင်အနေနဲ့ဝယ်ပေးရမလဲ မေးလိုက်အုံးမယ်။ အဲ့လိုမေးရင် သား ဘာမှ မလိုဘူး၊ အစ်မတွေသာ ဘာလိုချင်လဲ၊ သူ ဘာဝယ်ထည့် ပေးလိုက်မယ်လို့ပြန်ပြောမှာ သိနေတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 6/13/2008 03:12:00 PM
ဖိုးချွန်တောင် ၂၁ နှစ်ရှိသွားပြီ။
အိမ်ရှေ့မှာ စာအော်ကျက်နေတဲ့၊ အမေကို စာပြန်နေတဲ့ ကောင်လေးငယ်ငယ်လေးကိုပဲ မျက်စိထဲမြင်နေတယ်။
သူတို့အသက်တောင် ဒီလောက်ဆိုတော့ ကိုယ်အသက် ကိုယ် ပြန်တွေးကြည့်ရင်း စိတ်ညစ်သွားတယ် .. :P
ဖိုးချွန်တစ်ယောက် စိတ်ချမ်းသာလို့ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးတဲ့အကြောင်း ပြောလိုက်ပါနော်။
Saturday, June 14, 2008 3:26:00 AM
လာလည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဘလော့ဂ် 2006 feb ကတည်းက စတယ်။ လာလည်သူ 50000 ကျော်။ ဘာလို့ သတိမထားမိပါလိမ့် ???? နောက်မှ လာဖွ ဦးမယ် :)
ဟုတ်တယ်. ကိုယ်တို့ တွေ ကျောင်းတက်ဖို့ထွက်တာတဲ့အချိန်က ဖိုးချွန်က အတော်ငယ်သေးတာပဲ။ နောက်ပိုင်း ပြန်တွေ့ တော့ မှတ်တောင် မမှတ်မိဘူး။ လူကောင်ကြီးကြီး ရှိုးအပြည့်နဲ့ ။ ဒါပေမယ့် မိသားစုနဲ့စကားပြောပုံက တော့ အရင်အတိုင်းပဲ။ မပြောင်းလဲဘူး။
MK မွေးနေ့ ဆုတောင်းကို ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ မ MK ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြောလိုက်ပါတဲ့။ :)
Tuesday, June 17, 2008 10:41:00 AM
စပ်မိစပ်ရာ ဆိုတာ ကိုသင်္ကြန်လား..
ကျွန်မ ကိုသင်္ကြန်ရဲ့စပ်မိစပ်ရာ smsy blogspot ကို သတိထားမိပါတယ်။ ရောက်ဖြစ် ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ :) အခု အသစ်လုပ်ထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ စပ်မိစပ်ရာ mmwordpress ကိုလည်း အချိန်ရတိုင်း ရောက်ဖြစ်မှာပါ။ အခုနောက်ပိုင်း အလုပ်နည်းနည်းရှုပ်တော့ အရင်ကလောက် ဘလော့တွေ၊ စာတွေ လိုက် မဖတ်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။
Tuesday, June 17, 2008 10:54:00 AM
Don't be in tension!!
Stretch Your Mind to Reach Your Goals!
You are on the way up!!
Movie at Thursday
ဆုတောင်း - ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ 
Submit your Google Favicon idea
တမူးသာ - ဇော်ဝင်းထွဋ်
Dear Diary (12-15 June 2008)
Field Guide to Firefox3- Deb Richardson
Firefox3-17 June (Help Firefox setaWorld Recor...
Personality Test for Programmer
3G iPhone - Coming July 11, 2008
People Are Often Unreasonable - Mother Teresa
3rd Present for Year 2008
Let's do Exercise!